Tuugo Si la yaab leh u Xadday Beer Ku Taala Dalka Jarmalka Iyaga Oo Ku Xaday Mishiin Casriya | Raadgoob
Tuugo Si la yaab leh u Xadday Beer Ku Taala Dalka Jarmalka Iyaga Oo Ku Xaday Mishiin Casriya
Boolis ka howl gala koonfurta dalka Jarmalka ayaa raadinaya koox tuugo ah oo xadday beer weyn oo uu ka baxayay Canab.
Tuugada ayaa la baxsatay dhammaan mirihii canabka ee beertaas ku yaallay “iyagoo adeegsanayay mishiin casri ah oo mar qura wada xaalufinayay dhammaan miraha beerta”, sida uu booliska ka soo xigtay wargeyska maxalliga ah ee lagu magacaabo Rheinpfalz.
Arrinta ugu weyn ee ka careysiisay booliska ayaa ah xaqiiqada ku saabsan in beertaas aysan ku oollin meelaha ugu muhiimsan ee magaalada, hase ahaatee waxay ku taallay meel u dhow goob gawaarida la dhigto oo ka baxsan xaafadda Deidesheim.
Kooxdan Tuugada ah ee fikradda cajiibka ah la timid ayaa howshooda ku guda jiray intii u dhaxeysay qorrax soo baxa ilaa qorrax dhaca, taasoo u dhiganta muddo 12 saacadood ah.
Wakhtigaas ayay ugu suurta gashay iney wada goostaan miraha beerta oo culeyskoodu uu gaarayay 1,600 oo kiilo.
Miraha canabka cad cad ee ay xadeen ayaa ah kuwa loo adeegsado sameynta nooc ka mid ah khamriga, waxaana qiimahooda uu ku kacayaa lacag ka badan $9,000 oo doollar.
Booliska ayaa aad u doon doonaya raggaas, waxayna dadweynaha ka codsadeen iney la wadaagaan macluumaad kasta oo horseedi kara in la soo qabto.
Ma aha markii ugu horreysay ee xatooyo loo geysto beeraha uu canabka ka baxo ee gobolka Rhineland-Palatinate.
Lahaanshaha sawirkaFRANCE 3 TV
Image captionFaransiiska fardo ayey ku ilaaliyaan beeraha canabka
Sannadkii la soo dhaafay oo kaliya ayaa la xaday miro canab oo dhan 600 ilaa 800 oo kiilo.
Gobolka Rhineland-Palatinate ayaa waxaa ku yaalla warshadaha ugu badan ee soo saara khamriga dalka Jarmalka.
Dadka deegaanka ayaa ka shaki qaba in falalka xatooyada ah ay ku lug leeyihiin shirkadaha iska soo horjeeda ee khamriga soo saara, maadaama ay iyagu haystaan qalabka casriga ah ee beeraha noocaas ah loo adeegsado.
Stephan Altmann oo ka mid ah dadka deggan gobolkaas ayaa yiri “Arrintan waxaa sabab u ah tartanka iyo kala maseyridda u dhaxeysa shirkadaha”.